Ulwandle kunye nehlathi Rey de la Montaña ~ Bungalow 3 ~
Isithuba esikhethekileyo esinee-vibes ezimangalisayo!
Indlu entle kwindawo efihlakeleyo enendawo yegadi yabucala yeyoga kunye nokunye.
Ipropathi ibekwe malunga neemitha ezingama-800 ukusuka kolona lwandle lubalaseleyo kule ndawo!
Ndinomdla kakhulu kuyilo lwe-Eco oluhambelana nokusingqongileyo. Ndiyile kwaye ndakha le ndawo ukwenza amava apholileyo.- enye nendalo kodwa kunye noyilo olujolise kwaye lukhululekile.
Uya kuba nendlu epheleleyo yendalo kunye neyanamhlanje eyenziwe, ishawa eshushu kunye nezixhobo zokuhlambela. Igadi yetropikhi equka iintlobo ezinqabileyo kunye nezalapha ekhaya kubomi beentaka basekuhlaleni. Iihammocks, iindawo zokupheka ezigcweleyo kunye nendawo ephakamileyo yeyoga.
Malunga ne-10 min ukuhamba ukuya kolona lwandle lubalaseleyo edolophini.
Ndinikezela ngokhenketho kwi-atv kwiingxangxasi kunye neecascades, uDaniela inkosikazi yam ibonelela ngeeklasi ezifanelekileyo zepilate kwindawo yomgangatho weyoga ukusuka kwipropathi.
Sifumaneka e-Cocles kwindawo enezityalo nezilwanyana ezininzi, kufutshane nekhefu lolwandle i-Cocles kunye nomda woLondolozo lwemveli.
Indawo izaliswe yindalo yasendle.-Zilungiselele ukubona iintaka ezininzi kunokuba unokucinga, amasele anemibala, iCongos kunye nezinye izilwanyana ezinomdla. Ubusuku bunomlingo apha, kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi kunye nezandi zezilwanyana zasendle.
Ndikhe ndajikeleza ihlabathi., Kwaye ukonwabele ukudibana nabantu kwaye ubabonise ububele baseCostarrican. Ndihlala ndifumaneka xa ndihlala kwaye ndisebenza kulo mhlaba. (Indawo yeendwendwe yahlukile kwaye inomnyango owahlukileyo, ngoko undwendwe lunobumfihlo obugcweleyo.)
Ndihlala iminyaka eyi-13 kwaye ndonwabile ukwabelana ngolwazi lwam malunga neendawo zakho zangaphakathi kwiNdawo.
Ndikhe ndajikeleza ihlabathi., Kwaye ukonwabele ukudibana nabantu kwaye ubabonise ububele baseCostarrican. Ndihlala ndifumaneka xa ndihlala kwaye ndisebenza kulo mhlaba. (Indawo ye…